celebrity Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / celebrity
आमिर खानको दैनिक कमाइ कति छ ?
Tags: alert-news, amrikhan, bollywoodactor, celebrity, dailysalary, featured
खबरडेस्क,२४ चैत । भारतका चर्चित अभिनेताले आफ्ना कैयौं सहकर्मीलाई पछि पार्दै विज्ञापन दुनियाँकै बादशाह बनेका छन् । एक अंग्रेजी वेबसाइटले उनले दिनमै ३० करोड भारु कमाएको पुष्टि गरेको छ । एक अंग्रेजी वेबसाइटले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आमिर खानलाई सबैभन्दा… बाँकी अंश »
संसारले नचिनेकी साकिरा
Tags: celebrity, in-odd, shakira
खबरडेक्स,२९ पुस । सन्तान जन्माएपछि कोलम्बियाली पप गायिका एवं नर्तकी साकिरा इजाबेल मुबारक रिपोलको खुसीको ठेगाना छैन । उनलाई गायिका, गीतकार, नर्तक, रेकर्ड निर्माता, कोरियोग्राफर एवं मोडलका रूपमा मात्र चिन्नेहरूलाई यो मातृप्रेम देखेर अचम्म लाग्न सक्छ । सन् १९९० को… बाँकी अंश »
नेपाली नायिका केकि अधिकारिको तस्विर हेर्नुहोला है
Tags: alert-news, celebrity, gallery, keki-adhikari, nepali-actress
खबरडेक्स, ३ मंसिर । केकि अधिकारिको तस्विर हेर्दै गर्नुहोस ।
केकी फेसबुके रानी मात्र नबन्नु – नन्दिता के.सी.
Tags: alert-news, celebrity, featured, good-bad-behaviors, keki-adhikari, nandita-kc
खबरडेक्स, ३ मंसिर । नन्दिताको नजरमा केकी अधिकारी असल जोली स्वभाव : परिचितहरूसँग मात्र जिस्कने र ठट्टा गर्ने अनि सधै हाँसिरहने उनको स्वभाव राम्रो लाग्छ । फरक स्वर : उनको आवाजमा एक प्रकारको मिठास् छ, जसले उनलाई आफ्नो फरक शैली… बाँकी अंश »